Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30,000 bisiiba kaliya ka soo buugaagta yandırmaq.
Bishii Abriil, Forbes aaa ka warbixisay qaraaga iskiis u sameeyay Mark Dawson. Dawson wuxuu qara qara buagaag mumi qori kara dambaada. Laakiin, taasi maahan sheekada dhabta ah halkan. Qiyməti 450.000 dollar.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bil walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. Amazon, Amazonda və ya hubaal aagagga ay kue doonaya ay eegaan və ya bağlantıda.
2 Xasab kuguma aha inaad Buug qorto
5 Amazon-a müraciət edin
Kasta oo aadan awood və yeelan karin inaad iye jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka, orta ka orta ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada bloga ayaa ah inaad abuurto durdurro badan oo dawa.
Buugagtu waa dakhli hadhaaga ah. Buugga hal mar ayaad qoraysaa, waadna sameyneysaa, gelineysaa, waxayna lacag kuu dhiganeysaa illa iyo inta la iibinayo. Kasta oo ay waxyar ka sii badan tahay (waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan marmarka qaarkood dihirrigeliso buugga), taasi waa aasaaska aasaasiga ah.
Xasab kuguma aha inaad Buug qorto
Mid ka orta ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan barta blogka waaad bilaabi doontaa inaad ururiso mumyaabo badan oo waqti ka badan. Waxaad si sahlan ya bilaabi kartada aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal iyo buugaag.
Dooro mowduuc. Tusaale ahaan, haddii aan rabay inaan xiro qaar ka orta ah fariimahayga ku yaal Guriga Caruurta, waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka Gluten Pulsuz". Waxaan markaa ka raadin karaa koobab ku saabsan qaybtaas, fiiri waxa soo baxay, oo laga yaabo inuu ku daro dhowr ka mid ah kuwa u gaarka ah iyo talooyin qaar akhristayaasha oo ku dhejiya buug loagu talagalay alov.
Ka dhig mawduuc balaadhan. Haddii aad rabto buug weyn, waxaad dooran kartaa mawduuc balaadhan. Tousaale ahaan, haddii Jerry doonayo, wuxuu abuuri karaa buug loagu talagalay WHSR "Talooyinka qaraalka ee loogu talagalay dadka cusub". Wuxuu horey u leeyahay hage weyn si uu u bilaabo aasaaska buugiisa. Wuxuu markaa kaftamayaa marwalba qaraallada loogu talagalay talooyinka ugu muhiimsan oo ay wadaagaan.
Ka faa’iidaysiga dardargalinta isdhaafsiga. Blogkaagu və ya ahaadaa waddo laba dhinac ah. Waxaad kor u qaadi doontaa bugaag aadna u diri karta gaadiidka Amazon və ya iibsato nöqtəsi. Amazon waxay akhrinayaan waana in a heraan xiriirka ya boaqaan bartada.
Bağlantılarınıza uyğun olaraq, yaxşı bir şəkildə danışın, bəhs edin ki, qafna uusan horay və qorin ilə əlaqəli niş, qəfildən istifadə oluna bilər və bu blogaaga aiddir..
Vaxtı bixi inaad ku baarto buugaagta la heli karo ee mawduucaaga ah. Maxaa aan la daboolin? Maxaad ku dari lahayd?
Waxaad sidoo qala qaadan karta su’aalaha akhristayaasha ee ku yaala goobta oo isticmaal su’aalahan fikri ahaan si aad u qorto buug cusub.
Ka feker waxa kugu soo galey mawduuca. Şübhə yoxdur?
Hubi inaad isticmaashid qaraal wanaagsan Qabso xiisaha akhristaha. Waxaad doonaysaa akhristayaashu soo noqdaan oo ay soo iibsadaan buugaga soo socda.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo yandırmaq Amazonda. Hase yeeshee, furashada xisaabtu waa bilaash.
Marka ay timaado eBooks, qaabka ugu fudd ayaa ka sii fiican. Bir gün əvvəl şrift aasaaska ah oo ka fogow mum kasta oo wata qaraal ama muuqaallo. Haa, xitaa cinwaanka. Kaliya yaxşı fikirlər söylədi ki, frança qaab ebook ah.
Xulo labo isugeyn laba cibbaar leh ama is is orta, labo boos oo u dhexeeya cutubyada.
Ilaa aad qoreysid buug carruurta, iskuday inaad ku dhejiso qaraalka. Marka sevirəm, həddindən artıq dərəcədə yüksək qiymətə ehtiyac duyuram, 70% (inbadan oo ku saabsan tan daqiiqad gudaheed), waxaa lagugu soo dallaci doonaa sida buuggaagu u weyn yahay. Sawirraduhu wey sii ballacayaan faylka.
Amazon waxay bixisaa tilmaamo laguugu socdo iyada oo loo marayo geedi socodka buuggaaga loogu talagalay yandırmaq. Waxaa lagu magacaabaa Dhisidda Buuggaaga Xajka.
Waxaad iska diiwaangelin karta KDP bilaash, lakiin waa inaad bixisaa macluumaad shakhsi ahaaneed ujeedooyin canshuureed iyo inaad hesho lacag.
Amazon-a müraciət edin
İnternetə qoşulmaq üçün yandırmaq Direct (KDP)
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa Sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa 30 000 $ bishiiba